Kubaluleke kangakanani iminyaka yobudala be-SEO?
Ngaba kukho ukulungelelaniswa okwenene phakathi kwexesha elithile le-domain kunye nokusebenza kwe-SEO kwi-Google yokunyuswa kwesigaba? Lo mbuzo malunga noPhando lweeNjini zoKhenketho kunye nendlela onokubambisana ngayo nomhla wokubhaliswa kwesizinda ngumcimbi obalulekileyo, uxoxwa rhoqo ngabaphathi be-webmasters, kunye nabaninzi abanini.
Uninzi ngokuqhelekileyo, i-gurus yoshishino iphetha ukuba iminyaka yobudala kunye neziphumo ze-SEO ngandlela-thile zibambe ngesandla. Ngokungagqibekanga, iingcamango zabo zangoku malunga nokuba zinjani i-domain yobudala be-SEO, zihluke kakhulu, nangona kunjalo zenza ingqiqo ngendlela yazo:
i-domain yobudala ayinayo impembelelo kwi-SEO, kwaye ngoko ku-Google ubukhulu bendawo
kwisizinda seminyaka kuphela yinto ephakathi kwezigidi ezininzi zezinye iimpawu ezibandakanyiweyo kwi-Google's algorithms
yobudala besizinda lidlala indima ebalulekileyo ekuthathe isikhundla esiphambili kwi-SERPs
Kwakhona, zimbini iingongoma ezibalulekileyo emva kwengxoxo ekhoyo malunga nobudala be-domain kunye ne-SEO:
ngokuqwalasela ingcamango esetyenziswayo kwi-spammers ukubeka ii-domains ezintsha kwi-registry kwaye ngokukhawuleza ukuwayeka, amagama asanda kubhaliswa aqheleke aqeshwe yiwebhsayithi ye-spamming
nge-logic yangaphambili, igama le-domain elidala lithetha ukuba i-website ilungile kwaye ifanelwe, njengoko -sishicilelwe baqhubeka besebenzisa imimandla efanayo kwiminyaka
Ewe, sibona ukungathembeki okukhulu apha. Kodwa enye into endikuxelela yona ngokuqinisekileyo-yobudala be-domain kubalulekile xa kuqwalaselwa kunye nabakho - güngören arçelik servisi. Ndiyathetha ukuba xa umnini-mhlaba afumana ixesha elide kunye nelicocekileyo kwiirekhodi zeGoogle, akuyi kukungenisa ubuncinane impembelelo embi, ukuba unokugqiba ukuthenga igama elisetyenzisiweyo elisele likhona. Ukusuka kolunye uhlangothi, nangona kunjalo, kukho iindawo ezininzi "ezimbi", mhlawumbi ezaziwa ngaphambili njengegaxekile okanye ziphinde zihlawulwe ngu-Google ngexesha elide ngaphambi.
Ukuthintela inkambo enjalo yezinto ezimbi ukuba zenzeke, iingcali zincoma ukuba ziqwalasele kuphela ezo domains ezithengiswayo, ezifumana ulwazi loluntu. Ewe, abagxeki banokuthi bafumane ukukhuselwa ngasese, umzekelo ngeemibuzo ephi na, kufuneka ndiyivume. Nangona kunjalo, oko kuya kubangela ukukrokraza kubo.
Ngaloo ndlela, ndincoma ukuba ube ne-check-check of age domain kunye nembali yayo ngaphambi kokuba wenze isivumelwano. Kwaye kukho ezininzi izikhokelo ezifumanekayo ezifumanekayo ekufikeleleni okuvulekileyo ukujonga xa igama legama lomntu libhaliswe. Ngokomzekelo, unokuzama ithuluzi leNetcraft ukuze ufumane ukuba i-domain ikhonjiswe yi-Google ukukhwela ibhola okokuqala ngqa. Ukwenza njalo, unako ukuchonga amagama asemagunyeni athembisayo njengokwethenjelwa, njengoko anikezelwe ngenxa yeziphumo zabo ezihlala zihlala njalo, kwaye ngoko zibeka kakuhle kwi-SERPs.
Qaphela, nangona kunjalo, isiphakamiso sam asithethi nantoni na ukuba igama lesizinda elisanda kudala liza kutshabalalisa imfazwe ngokumelene nabakhuphiswano abasakhulayo, ngoko ke kunokuba kunobuthathaka obunzima ukunyuka phezulu kwimiphumo yokukhangela. "Omdala igama lakho lesizinda, unomgangatho ophezulu uya kufumana" - okungekho i-100% evumelekileyo. Qhubeka ukhumbula engqondweni, ukuba ixesha lezinto ezilungileyo lichaphazela igunya le-domain, simele sivume. Emva koko, nangona kunjalo, iminyaka yobudala kunye ne-SEO inokuqhuba i-website ukuba ibekwe ngendlela yayo, zombini ilungile kwaye iyingozi.